Maninona ireo mpizahatany tompon'andraikitra no tokony hitsidika an'i Honduras, El Salvador, Dominican Republic ary Guatemala
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Honduras » Maninona ireo mpizahatany tompon'andraikitra no tokony hitsidika an'i Honduras, El Salvador, Dominican Republic ary Guatemala
Aprily 15, 2018
Ireo mpizahatany tompon'andraikitra dia tokony hibanjina ny hitsangatsangana sy hanohana an'i Honduras, El Salvador, Repoblika Dominikanina ary Goatemalà amin'ny alàlan'ny fizahan-tany. Ny mpizahatany tompon'andraikitra dia tokony hijery tsara rehefa manohana firenena Karaiba sy Amerika Latina hafa. Tonga ara-potoana ity hafatra ity amin'ny fanombohan'ny WTTC (Vovonana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany) izay hanomboka ao Buenos Aires, Arzantina.
Afa-tsy an'i Honduras, El Salvador, Dominican Republic ary Goatemalà, firenena amerikana latina sy karibeana hafa no sahirana mandroso manohitra ny fanambadian'ny zaza raha oharina amin'ireo firenena any atsimo atsimo, araka ny tatitry ny UNICEF.
Na dia nampihena ny trangan'ny fanambadian-jaza aza ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, “tsy izany no nitranga tany amin'ny faritra misy anay, izay vehivavy iray amin'ny vehivavy efatra no manambady alohan'ny 18 taona”, hoy ny lehiben'ny UNICEF any an-toerana, Maria Cristina Perceval.
Amerika Latina sy Karaiba no hany faritra eto amin'izao tontolo izao izay tsy nihena be ny fanambadian'ny zaza tao anatin'izay folo taona lasa izay, hoy ny tatitra farany nataon'ny Masoivoho ho an'ny ankizy UN (UNICEF).
"Mandinika ny tena fandrosoana izahay amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao mba hiarovana ny zazavavy amin'ny fanambadian-jaza," hoy ny filazan'ny Maria City Cristina Perceval, filohan'ny Unicef ​​any Amerika Latina sy Karaiba. "Saingy tsy izany no zava-misy any amin'ny faritra misy anay, izay vehivavy iray amin'ny vehivavy efatra no manambady alohan'ny 18 taona."
Vokatr'izany, ireo tovovavy ireo dia tsy mahazo tombontsoa amin'ny fiainana mety mitovy amin'ny antonony sy maharitra, ary atahorana kokoa herisetra ara-nofo, fitondrana vohoka aloha, fialana an-tsekoly, ankoatry ny fanilihana ara-tsosialy an'ireo mitovy taona aminy, nanampy i Perceval.
Firenena efatra ao amin'ny faritra ihany no nandrara ny fanambadiana zaza, miaraka amin'i Honduras, El Salvador, Dominican Republic ary Goatemalà.
Tamin'ny volana febroary, tatitra iray hafa an'ny Unicef ​​no nampitandrina fa tsy ampy ny fandrosoana amin'ny fampihenana ny avo fitondrana vohoka ny zatovo ny tahan'ny any Amerika Latina sy Karaiba: na dia "nihena kely" ny tahan'ny fitondrana vohoka ho an'ny tanora tato anatin'ny telopolo taona lasa, manana ny taha avo indrindra faharoa eran'izao tontolo izao ny faritra.
Ny isan'ny zazavavy nanambady tamin'ny fahazazany dia nijanona 12 tapitrisa isan-taona ary tsy misy politikam-bahoaka handaminana tsara ny olana, mihoatra ny Ankizivavy 150 tapitrisa fanampiny hanambady alohan'ny faha-18 taonany amin'ny 2030, nahita ny tatitra.
Maneran-tany, manodidina ny iray amin'ireo zazavavy adolantsento enina (15 ka hatramin'ny 19 taona) no manambady ankehitriny na manambady. I Afrika Andrefana sy Afovoany no manana ny tahan'ny tanora manambady (27 isan-jato) avo indrindra, arahin'i Afrika Atsinanana sy atsimo (20 isan-jato) ary ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (13 isan-jato). Amerika Latina no mitana ny laharana fahefatra miaraka amin'ny 11 isanjaton'ny zazavavy tanora rehetra.
Raha ny filazan'ny UNICEF, ny fanambadian'ny zaza sy ny sendika voalohany ao amin'ny faritra dia misy ifandraisany amin'ny taha ambony amin'ny fitondrana vohoka ny zatovo, ny faharoa eto an-tany, ary ny mety hisian'ny herisetra ara-nofo, ankoatry ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy.
Ireo anton-javatra izay manatevin-daharana ny maro hafa toy ny fahantrana, ny fenitra ara-tsosialy, ny anjara toeran'ny lahy sy ny vavy ary ny fifandraisana, ny finoana ary ny banga amin'ny lalàna nasionaly.
'Any amin'ny faritra, ny fitovian'ny ankizivavy dia voafetran'ny fiantraikan'ny reny, ny herisetra ary ny fotoana voafetra. Tsy azontsika atao ny manakimpy ny masontsika amin'ny potika very sy ny zon'ny very ', noho izany ny antso maika hamarana ireo fomba fanao ireo hoy i Perceval.
French Quarter New Orleans, ivon'ny fizahantany amerikana ankehitriny
Shangri La ao amin'ny ATM: fampidirana endrika vaovao mifantoka amin'ny fianakaviana